Logitech Harmony J.Randall Review - News Ọchịchị
Logitech Harmony J.Randall Review
The Logitech Harmony J.Randall bụ ihe kasị mma do-it-niile n'ime obodo ego azụta. Ọ nwere ole na ole adịghị emezi emezi na ndị na e nwere ga-ejikari-ala na ngwaọrụ ị na-agbalị ịchịkwa kama ime onwe ya, dị ka ọ na PS4.
Si n'ụlọ ntụrụndụ na wireless ọkà okwu na-ọkụ, thermostats, sensọ, Mkpu na ndị ọzọ, nke a bụ onye na n'ime ime obodo na-achị achị ha niile - maka a mara mma price
Isiokwu a na-akpọ “Logitech Harmony J.Randall review: mfe iji na n'ime ime obodo na-ewe ndebe nke ebe obibi gị” e dere site Samuel Gibbs, n'ihi na theguardian.com on Monday 4th April 2016 06.00 UTC
The Logitech Harmony J.Randall bụ onye na n'ime ime obodo na-achị achị ha niile, si TV, ịtọ-top igbe na console ka ọkụ, thermostat, wireless ọkà okwu na internet ejikọrọ sensọ, ya Aga ịchịkwa ọtụtụ.
Logitech nwere ogologo akụkọ ihe mere eme nke na-eme ka ndị magburu onwe eluigwe na ala remotes nwere ike ọ bụghị naanị na ịchịkwa ihe nile Iye ngwaọrụ n'ihu gị telivishọn, kamakwa ekwe ka ị na-eme ka omenala remotes maka ịchịkwa a ìgwè ndị dị iche iche ngwaọrụ n'otu oge.
The Harmony J.Randall bụ ọhụrụ n'elu na elu ugwu na-eme-ya-nile na n'ime ime obodo, a ngwaahịa na ugbu a kpaliri wezụga nanị gị ntụrụndụ center na chọrọ ijide onwe gị ofụri ufọk.
Nkebi atọ usoro
The J.Randall na ya na-ebo n'ọdụ ụgbọ mmiri ahụ na Harmony Hub-nri. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
E atọ ọcha na ndị Logitech Harmony J.Randall. I nwere n'ime obodo, ndị ehiwe na-eji ngwa ahụ.
Ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma e mere, kasị ala iji remotes m nwere obi ụtọ jide. E nwere remotes maka show na e nwere remotes maka iji, na nke a bụ nke ikpeazụ.
Ọ dị mfe iji ruo niile buttons, ha nwere ọmarịcha, anabata obi na-adị ha. The n'ime obodo nwere a heft ka ya na-enweghị ịbụ arọ na soft-adịgide azụ ka ọ dị mfe ịnọgide na-. Ihe ndị a niile ga-a nyere maka a na n'ime ime obodo na-efu dị ukwuu dị ka a telivishọn, ma ndị ọzọ na ngwọta efu yiri ichekwa ada on a bụ isi nke ihe.
The top atọ nke J.Randall bụ a 2.4in agba touchscreen ị na-ahọrọ na ngwaọrụ, -ahọpụta ọkacha mmasị ọwa ma ọ bụ ihe omume, ma ọ bụ n'ihi na mwube oyi omenala iwu nke na-adịghị ewee anụ ahụ buttons.
N'ime ime nwere ya Nchaji n'ọdụ ụgbọ mmiri n'ime nke ọ Ohere mepere mgbe anaghị eji, ma ga-adịru a mma izu ma ọ bụ n'etiti ebubo ma ọ bụrụ na ị na otú chọrọ.
The Harmony ngwa na-eme ka ịtọlite ​​n'ime obodo via a smartphone a dị mfe, eduzi nzọụkwụ-site-nzọụkwụ usoro. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
Ịtọlite ​​ime bụkwa otu n'ime ndị kacha Filiks m na site na eluigwe na ala remotes, ma ọ na-apụghị mere na J.Randall onwe ya.
Mbido-achọ ihe Android ma ọ bụ iOS ngwaọrụ, ma ọ bụ a na kọmputa. The Harmony ngwa rụnyere a onye ọrụ na akaụntụ na-agbakwụnye ngwaọrụ. Ọ na-eduzi ọrụ site mwube ihe omume dị otú ahụ dị ka "Watch TV" na-ekwe onye n'ime obodo na-atụgharị gia on, mgbanwe ọwa na satellite igbe, ịhazie olu na iji nkwupụta ụda na-agbanwe picture ụdịdị na TV.
All mkpa ka ị mara bụ ihe ị na-agbalị ka o guzo ọtọ na, gụnyere ihe nlereanya nọmba bụrụ na ọdabara. N'ime asaa nkeji m nwere isii ngwaọrụ ntọlite ​​na ise eme dị njikere ịlụ.
Na-ezo ya n'ebe ọ bụla
The remote-ejikọ na Hub-ejighi eriri, nke ahụ na-ezigara iwu ndị na ngwaọrụ, nke pụtara na n'ime obodo nwere ike kwuru na ebe ọ bụla ma ọ bụ jiri n'ime ime ụlọ ọzọ. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
The J.Randall-ejikọ na Harmony Hub, nke n'aka nke fụrụ si gị iwu dị iche iche ngwaọrụ site na infrared, Wi-Fi ma ọ bụ Bluetooth, bụla a chọrọ.
The Hub abịa na abụọ Iye blasters na nwere ike plugged n'ime azụ ịgbatị akara ukwu nke ya akpọsa ikike, nke bụ bara uru ma ọ bụrụ na i nwere a ibu ngwá zoro a kọbọd.
Ọ pụtara na ị na-adịghị na-ezo n'ime ime ọ bụla akpan akpan direction na omume bụ ngwa ngwa – ọtụtụ ihe ngwa ngwa karịa aga Iye dabeere na Logitech Harmony remotes.
The J.Randall na-agụnye kewara abụọ ọrụ: "Omume", nke bụ ngwakọta nke ngwaọrụ na omume unu ghọọ otu n'ime obodo; na ngwaọrụ, nke depụtara niile nke ngwaọrụ gị n'otu n'otu na akara ha bụla ọrụ.
The smartphone ngwa na-arụ ọrụ dị ka onye ozi n'ime obodo, na olu buttons inwe ike ịchịkwa TV si olu, dị ka ọmụmaatụ. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
Kụrụ "Watch TV" na touchscreen ihe atụ, na ọ ga-atụgharị na ihe niile dị mkpa nke na-ekiri TV ma mee ka a amalite ọwa. N'ihi na m na nke ahụ bụ nkwupụta ụda, na satellite igbe na TV, niile setịpụrụ na nri input na mode na-akpaghị aka. M ahụ ga-esi a omenala n'ime obodo ịgbanwe olu na nkwupụta ụda, ịgbanwee ọwa na satellite igbe ma rụọ ọrụ picture-in-picture na TV.
Ọ bụrụ na m chọrọ gbanwee ka Amazon Fire TV, M kụrụ na button na ọ switches ndenye na nkwupụta ụda, switches kwụsịrị satellite igbe na anyị na oyi.
Ozugbo ị na-mere na ọtụtụ, pịa raara onwe ya nye anya bọtịnụ na nnọọ elu nke na remote na ya na-elekọta ndị ọzọ.
Na n'elu ọnwa abụọ iji ya na m nwere ma na-enwe ya na-atụgharị ihe on ma ọ bụ rụọ ọrụ nri mode, ma e nwere na-enye aka buttons idozi ihe ma ọ bụrụ na ha na-aga na-ezighị ezi site enyocha ihe na-abụghị on ma ọ bụ n'ụzọ ziri ezi enịm.
All otu omume pụkwara rụrụ iji Harmony ime ngwa ọ bụla android ma ọ bụ iOS ngwaọrụ, nke pụtara ọzọ n'ime ụlọ na-enweghị ka nwere n'ime ime ịgbanwe chanel. Ma nke ahụ bụ ihe ọma ma ọ bụ a ihe ọjọọ akwuru na na Ọnọdụ nke gị ndụ ụlọ.
Internet ihe jiwo
The n'ime obodo nwere ike ịchịkwa a dịgasị iche iche nke internet ihe ngwaọrụ, gụnyere akwu smart thermostat na bụla na ngwaọrụ jikọọ na SmartThings usoro. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
The Harmony J.Randall bụ banyere dị ka a eluigwe na ala n'ime obodo nwere ike inwe, ma ọ na-akawanye a otutu ihe na-akpali mgbe ị na-amalite na-agụnye gị internet ejikọrọ ngwaọrụ n'ebe obibi gị.
Enweghị ihe ọ bụla nhazi, na Harmony Hub pụrụ ịchịkwa ọtụtụ narị smart n'ụlọ ngwaọrụ site na ọkụ ka thermostats ka ọkà okwu.
Dị ka ọmụmaatụ, ihe ọ bụla ahazi na Samsung si SmartThings Hub A pụrụ ịchịkwa na iji Harmony. Ị nwere ike ịkwụsịtụ, igwu egwu, ikwu tracks na ịhazie olu nke Sonos ọkà okwu. Ị nwere ike ịlele steeti ọnụnọ gị, okpomọkụ, ọrụ ma ọ bụ mmiri sensọ.
Ọ ga-ọbụna gwa gị ma ọ bụrụ na gị akwu smart thermostat-aga n'ime pụọ mode n'ihi na ọ bụghị ahụrụ ị a na mgbe, ma ọ bụrụ na ị na-arụsi ọrụ ike na-eji J.Randall na oge, ikwe gị ya laghachi azụ on na ịgbanwe ọnọdụ okpomọkụ ma ọ bụrụ na-ịchọrọ ị.
Ọ bụghị naanị na ike ndị a ngwaọrụ na-achịkwa n'otu n'otu, ma ha nwekwara ike ike ikpokọta n'ime ihe omume. M nwere ike gbanyụọ niile ọkụ n'ime ụlọ na otu button, ma ọ bụ na m pụrụ inyoghi inyoghi nke nēnye ihè di na ezumike na naanị oriọna na akuku mgbe ịmafe na TV.
A otutu nke nwere nke internet ihe ebute smart ngwaọrụ n'ịrụ timed ọrụ. Ma mgbe ị na-ịkpalite ihe emereme nri a nkeji, ọ bụ mgbe a bụrụ na nke na-egwu ala si a smartphone, ebukwasịkwa na ngwa na ọkụkụ a button.
The J.Randall ewepu na rummaging, -ọbu dọba ya nile n'ime otu n'ime obodo ngwa na ekwentị gị.
N'ime ime dịruru gburugburu a izu nke mgbede eji kwa ụgwọ, ma ọ bụ nwere ike dị nnọọ ga-ekpe ya n'ọdụ ụgbọ mmiri n'otu ntabi anya. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
The otu ihe na-akụda ihe m na hụrụ na J.Randall bụ ya akara nke Sony si PlayStation 4. The PS4 na-eme ka a oké media player na mgbe J.Randall nwere ike ejikwa akụkụ ụfọdụ nke ya, n'ime ime ike gbanye PS4, apụghị ịchịkwa Netflix playback ma ọ bụ ụfọdụ ihe ndị ọzọ ibe n'ibe. Ọ na-agaghị gbanyụọ ya, naanị etinye ya n'ime ụra mgbe ị see ike button.
Logitech blames Sony maka nke a, nke esie ọnwụ na ndị bụ isi ọkwọ ụgbọala na-enwekarị ihe PS4 si njikwa, eme ka a lousy media ahụmahụ.
Ọ bụ mfe karịa otú m ga-amasị mmadụ na mberede kụrụ a button na touchscreen mgbe atụtụ n'ime ime site na sofa
Channel favorites wepu mkpa aga ịchụ nta na ndu n'ihi na BBC One ke HD oge ọ bụla
Achọ ịchịkwa ụzọ abụọ nke Sonos ọkà okwu agwụ na onye a na tụgharịa elu ma ọ bụ ala nanị, ọ bụghị ma
The J.Randall nwere ike izipu Iye iwu ozugbo, ma ọ bụrụ na ị kwesịrị ya ka, nke na-eme ka ọ dịkwuo mfe controll ihe n'ime ime ụlọ ọzọ
The onwunwu nwa Hub bụ a ájá magnet
The Logitech Harmony J.Randall bụ n'elu elu ugwu n'ime obodo si ụlọ ọrụ, -efu £ 280. The Hub nwere ike zụta na ya maka ojiji na a smartphone maka £ 100 ma ọ bụ na a na ihuenyo-erughị ime ka £ 120, nke dị mma uru ma ọ bụghị dị ka adaba dị ka bụghị ihe niile nwere ike mere site n'ime ime.
Nnukwu nsogbu bụ price: ọ bụ nnọọ oké ọnụ maka a n'ime obodo. Logitech si Harmony Hub bụ ebe ezigbo nwere ụgha, ya ike ijide onwe mara mma nke ukwuu ihe ọ bụla na-aghọ ihe interface maka IoT ngwaọrụ. Ịchịkwa ụlọ gị ntụrụndụ bụ tedious na naanị a smartphone, Otú ọ dị, dị ka ọ bụ mgbe otu button push ka ọrụ ahụ na mgbe niile na-ewe ogologo oge karịa ị ga-amasị.
Ihe ndị na-annoyed site plethora nke remotes ọdụ na tebụl kọfị na-achọ ihe na-arụ ọrụ, mgbe ahụ J.Randall bụ uru ego nke ntinye.
Uru: Njikwa ihe fọrọ ihe niile, ọ dịghị akara-of-n'anya chọrọ, mfe melite na-eji ngwa ahụ, nwekwara ike iji ngwa ịchịkwa, IoT mwekota, ergonomic
Ọghọm: oké ọnụ, dịtụ mfe mmadụ na mberede pịa bọtịnụ na touchscreen mgbe atụtụ n'ime ime, Mbido apụghị mere na na na n'ime ime obodo
Azụ nke ehiwe nwere a microUSB anya maka ike, ukwu abua n'ihi Iye blasters na a nrụpụta button kwesịrị ihe niile na-aga na-ezighị ezi. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
Apps, Nkeji edemede, Ngwa, Internet ihe, mobile igwe, PlayStation 4, Nyocha, Samuel Gibbs, smart obibi, smart mita, Smartphones, Sony, Technology, Television, TV gụgharia
← The Nine Kasị akụda mmụọ Mejọọ Nke ahụ All Video Game Player Mee Huawei kpughe ọgbụgba P9 na P9 Plus Smartphones na-na iPhone na Galaxy →